> Resource > Ladnaansho > Dhibaatooyinka u Patriot Xporter Recovery
Sida loo soo ceshano Data ka Patriot Xporter Flash Drive
My Patriot Xporter 4 GB Flash Drive ayaa had iyo jeer ahaa aalad lagu kaydiyo muhiim ah in aan nolosha, laakiin maanta waxaa loo magacaabay disk laga saari on my computer iyo xitaa kuma heli karo. Waxaa jira dad badan oo qiimo leh sawiro, dokumentiyo iyo videos waxa ku jira. Waxaan rajaynayaa waxaa jira hab inuu ka soo kabsado xogta ka Patriot Xporter flash drive ama ugu yaraan flash mar kale isticmaali karo. Caawimaad badan waa laga qiimeeyaa.
In kastoo ay jiraan dhibaato aad Patriot Xporter flash drive, waxaad weli waa nasiib in ay wali la aqoonsan karo sida drive adag on your computer. Waxaad soo gelin karo ee wilds ee internetka, iyo run ahaantii waxaa jira fursad wanaagsan si aad u hesho macluumaadka haddii aad heli Patriot Xporter software saxda ah soo kabashada xogta dib. Halkan waa mid aad u: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Waxaa soo kabanayso oo dhan tirtiray, lumay, la kharribtay, formatted ama xitaa xogta geli karin ka Patriot Xporter flash drive, videos, Cajalado, sawiro, sawirada, waraaqaha, iwm
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hadda!
Tallaabo-tallaabo Tusaha Qabtaan Patriot Xporter Data Recovery
Si aad u soo kabsado xogta ka Patriot Xporter flash drive, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay ku xidhmaan aad Patriot Xporter iyo ka arrinsashada qasabno yar oo sahlan oo la barnaamijkan
Tallaabada 1 Daahfurka barnaamijka oo guji "Next" ee suuqa kala bilowga.
Tallaabada 2 Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan noocyada file aad rabto in aad dib u soo ceshano, ka dibna riix "Next" si ay u bilaabaan aad soo kabashada Patriot Xporter.
Tallaabada 3 Dooro warqad drive aad Patriot Xporter flash drive oo guji "Next" button in ay sii wadaan.
Tallaabada 4 Hadda Wondershare Data Recovery diyaar u yahay inuu raadiyo files aad Patriot Xporter flash drive, guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad dooran kartaa "Enable Deep Scan" iyo "Enable ceeriin Recovery" fursadaha aad haddii scan caadiga ah ma heli faylasha aad rabto in aad soo kabsado.
Talaabada 5 Barnaamijku wuxuu muujin doonaa waxyaabaha uu ka helay qaybaha sawirka kadib. Waxaad ka arki kartaa magacyada faylka si loo hubiyo in faylasha aad waxay yihiin iyo in kale.
Dooranaysaa aad files doonayay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ama qalab kale lagu kaydiyo.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha mar badbaadin xogta soo kabsaday si aad Patriot Xporter flash drive.
1 tutorial waxa loogu tala galay dadka isticmaala Windows. Users Mac Mac fadlan booqo version user guide halkan: hage user Wondershare Data Recovery for Mac
2 Wondershare Data Recovery waa socon muddo ku dhow oo dhan flash aaladaha: flash drive, drive qalinka, drive USB, kaadhka xusuusta, ul soo xusuusta, iwm
3 Ilaa iyo inta aad files lumay aan la overwritten by xog cusub, waxaad u soo ceshano karo xogta ka Patriot Xporter flash drive la barnaamijkan.